सिर्जना र यथार्थको प्रतिबिम्वन::local sandesh
सिर्जना र यथार्थको प्रतिबिम्वन
लोकल संदेश / शुक्र, फाल्गुन २४, २०७५
पछिल्लो समय सिर्जनात्मक हिसाबले निकै चर्चा ,परिचर्चा बटुलिरहेको लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको व्यङ्गात्मक गीतको बिषयलाई लिएर नेपाली समाज करिब करिब दुई कित्तामा बाडियो । थरि थरिका बिचार हरु प्रकट भए । ब्यङगबिनोदले भरिपूर्ण यस गीतमा नेपाली राजनीतिक शक्ति र सत्ता पक्षीय परिदृश्यमा देखिएका बिकृति बिसङति लाई उजागर गरेको छ । यद्यपि यसको शब्द छनौट आदि बारे सर्जक हरु बीच मत्यैक्ता भने पाईएको छैन, जे होस ब्याप्त बेथिती ले आजित बनेका नेपाली लाई आहतमा राहत मिलेको छ उपर्युक्त सिर्जनाले । यस टिप्पणीमा हामी गीतका बारेमा नभई सिर्जनामा यथार्थको उठान गर्ने वा त्यसाई प्रतिविम्बित गर्ने वारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने छौ । २०४६साल यता पनि सत्ता र शक्ति को बलमा नेपाली समाज धेरै पटक लुटिएकै हो पञ्चायत कालिन नेपाली समाजको झन कुरा नगरौ ।
आफ््नो सिर्जनामा मार्फत शासकको प्रसस्ती मात्रै गाईन्छ वा देश र जनताले भोगिरहेका दुख, कष्ट पीर र व्यथा माथि आँखा चिम्लिन्छन भने त्यो सर्जक लाई के भन्ने ? आज जे भैरहेको छ ठालु भनिने हरुले जे गरिरहेका छन् त्यसलाई नदेखेर फोस्रा भावनाका कुराले मात्रै एउटा सजिव र जीवन्त सिर्जना बन्दैन । हरेक सर्जक सँग समाजको यथार्थ लाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्न सक्ने खुबी हुन जरुरी छ ।
संगीत ,कला र साहित्य अर्थात् कुनै पनि सिर्जनशील्प कला हरु केवल दिमागी खेल मात्रै कदापि होइनन र हुन पनि सक्दैनन् । कुनै पनि सिर्जनामा समाजको सजिव चित्र उतारिएको हुनुपर्छ सजिव यथार्थ लाई कलाको माध्यम बाट परिस्कृत गरिएको हुनु पर्छ । हाम्रा लेखक ,कवि कलाकारहरु आपसमा मिल्न नसकेर पार्टी पिच्छे फरक फरक संघ बनाएर बसेका छन । प्रगतिशील लेखक संघ र नेपाली लेखक संघकै कुरा गर्ने हो भने एउटा वामपन्थी लेखकहरुको र अर्को नेपाली कांग्रेस निकट लेखक÷कवि लेखकहरुको मानिन्छ । माथिका संघ संगठनमा आवद्ध श्रष्ठा हरु आ–आफ्नाे आस्थागत नैतिकता कै धरातल मा उभिएर सिर्जना हरु पस्किन्छन ।
आजका कतिपय प्रगतिशील भनिने श्रष्ठा हरु उजागर गर्नु पर्ने सत्यता लाई नदेखि उल्टै त्यसलाई ढाकछोप गर्ने खालका सिर्जनामा तल्लीन देखिन्छ । यसले प्रगतिशील कला,साहित्य तथा समग्र सिर्जनात्मक पाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोण लाई बदली गरिदिएको जस्तो अनुभूति गर्न थालिएको छ । नेपाली समाजमा बिद्यमान, बिकृति, बिसङगति, कुर्सीका लागि हानथाप, पजेरो प्राडो संस्कृति, बढ्दाे भ्रष्टाचार, घुसखोरीतन्त्र दिनदिनै आउने बलात्कारका समाचार आदिले नेपाली समाज कता जादैछ भन्ने दर्शाउछ । नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानले आजको परिवर्तन ल्याए पनि सारमा नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भन्दा अर्को अनुभूति गर्न पाएका छैनन । आफुले जिताएर पठाएकाहरुको आफ्नै ताल छ राजनीति सेवा नभएर पेसा ब्यावसाय बनेको छ । बर्गिय खाडल कायमै छ अबका सर्जकले यी कुराहरुलाई कसरी उजागर गर्ने ? यसबारे हामीले गम्भीरता पूर्वक सोच्नु पर्ने देखिन्छ । साहित्यकार पारिजात ले देखेको कुरा लेख्न नसक्ने हरु प्रगतिशील हुन सक्दैन भनेकी छन ।
यतिबेला देशमा वामपन्थी तथा प्रगतिशील भनिने राजनीतिक दलको भारी बहुमतको सरकार छ तर जनताको चाहना त्यहा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन पुरानै संरचनाको गुञ्जास पाईन्छ हरेकमा । प्रगतिशील खेमाका सर्जकहरुले यस्ता तथ्यहरुलाई आफ्ना सिर्जनामा समेट्न जरुरी छ । कुनै पनि सर्जक के कति प्रगतिशील छ भन्ने मापन उ स्वयं होइन उसले सिर्जेका सिर्जना र उसले अगाल्ने दृष्टिकोण नै हो भन्नेमा सायद दुई मत छैन । हामीले आफुलाइ प्रगतिशील खेमाका हौ भन्न रुचाउने हो भने बिचार र ब्यावहारमा एकरुपता ल्याउन कति पनि ढिलाइ गर्न हुदैन । फेरि आफ्नाे सिर्जनामा समाजमा जे भईरहेको छ आम जनताको भावना के कस्तो छ त्यसलाई सुन्दर तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने कलामा पनि प्रगतिशील श्रष्ठाको ध्यान जानू उतिकै जरुरी छ ।
बिपी केमा चुके, केमा चुकेनन् ?
सरकारी श्रेस्तामै छैन मेची राजमार्ग